कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २७५५ जनाको स्वाब रिपोर्ट नेगेटिभ – Yug Aahwan Daily
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २७५५ जनाको स्वाब रिपोर्ट नेगेटिभ
युग संवाददाता । १० जेष्ठ २०७७, शनिबार ११:३८ मा प्रकाशित
558 पटक हेरिएको
जुम्ला, १० जेष्ठ । रासस
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला (कास) मा परीक्षण गरिएका सबै स्वाबको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । साविक कर्णाली अञ्चलभित्र पर्ने पाँच जिल्लामध्ये मुगु, हुम्ला, कालिकोट र जुम्लाबाट विभिन्न मितिमा संक्रलन गरेर परीक्षण गरिएका दुई हजार ७५५ व्यक्तिको स्वाब पिसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो ।
प्रतिष्ठान जुम्लाका निर्देशक डा. मंगल रावतले प्रतिष्ठानमा शुक्रबारसम्म संक्रलित ती स्वाबको पिसीआर परिक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताए । भारत गएका तथा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका स्थानीयवासी भित्रिने क्रम बढदै जान थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाएर स्वाब संक्रलन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको डा. रावतले बताए ।